I-Arsty Getaway w/ I-patio yangasese eduze ne-Manhattan
Le ndawo eyingqayizivele inesitayela sayo sonke. Ihlotshiswe ngobuciko basezindongeni kanye nefenisha enemibala, iyindawo yokwelapha. Ikhishi elisanda kulungiswa, i-patio enkulu enendawo yokudlela evulekile yangaphandle. Indawo ephelele yokuhlangenwe nakho kwakho okuyingqayizivele edolobheni. Imizuzu eyi-10 iya esiteshini sesitimela iPath kanye nesikebhe kanye nemizuzu eyi-15 ukuya eManhattan. Leli yifulethi eliphansi elihlangene futhi elimiswe kahle elinokufinyelela emigwaqweni yangasese, indawo yokuhlala yangasese enamagumbi, kanye ne-central air conditioning.
Njengengcweti nomklami, uMisdoodler Joanne wenze yonke idizayini yangaphakathi kanye nawo wonke umsebenzi wokudweba nobuciko waleli fulethi elithokomele. Sifuna ukuletha umqondo wobuciko olula, umqondo oqukethe imigqa emhlophe nemnyama kuphela ukuze sisize izihambeli zethu zikhulule umphefumulo kulo mhlaba obabazekayo oyinkimbinkimbi, umlayezo noma ubani angase awukhumbule ephusheni lakhe elikude ebuntwaneni elicacile nelilula, isipiliyoni sokwenza isivakashi sethu sikhululeke ngempela.
I-HDTV engu-42" ene- I-Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, I-Roku
Itholakala kwenye yezindawo ezidume kakhulu eduze kwaseManhattan, iseduze nenqwaba yezindawo zokudlela, amabha, izitolo zezitolo nezindawo zokuthenga. Futhi ingenye yezindawo eziphephe kakhulu nezinhle kakhulu ongahlala kuzo. Amaminithi angu-5 uhamba ngezinyawo uye ku-Shake shake, ukuya endaweni yokubhaka edumile ye-Carlo's Bakery yamakhekhe amangalisayo noma i-cannoli, ukuya emapaki e-Pier anokubukwa kwe-Manhattan. Cishe amaminithi ayi-10 uhambo oluhle lokuya ezintweni zokuhamba zomphakathi, isitimela sePath, nesikebhe esiya eManhattan. Ihlukile kunempilo yesifunda, iyindlela yokuphila ecacile, ngezinye izikhathi ungase uzwe umsindo wedolobha, kuyingxenye yesipiliyoni esihlala eduze nendawo ephakathi nendawo yonke.
Sizohlala sitholakala kuwe. Mhlawumbe impendulo ehamba kancane kusukela ngo-9pm kuya ku-7am. Siyabonga ngokuqonda kwakho.